vendredi, 19 février 2021 18:23
Roland Ratsiraka : Ataon'ny olona akaiky ny fitondrana ampihimamba ny toe-karena
Nilaza ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka nandritra ny valandresaka natao tamin’ny mpanao gazety, androany zoma 19 febroary tetsy amin'ny Carlton, fa tsy mandeha amin’ny laoniny ny laharam-pahamehana ao anatin’ny sain’ny mpitondra fanjakana. Lasa any amin’ny toeran-kafa ny laharam-pahamehana ho entin’ny mpitondra ankehitriny ka hany lasa mikorontana ny raharaham-pirenena. Ilaina hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Toamasina ny fotodrafitrasa iombonana, fa tsy fotodrafitrasa ara-panatanjahantena no handaniana vola tsitokotsiforohana. Mbola ao ny sosialim-bahoaka izay mbola tsy voavaha hatreto.
Notanterahina ny alatsinainy 15 febroary, teny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny (MAE) Anosy, ny fivoriana mikasika ny drafi-pirenena marolafy iatrehana ny valanaretina Covid-19. Nitarika izany ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, niarahana tamin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta, ireo solontenan’ny mpiara-miombon’antoka, ireo eo anivon’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana, ary ny teo anivon’ny fiarahamonim-pirenena. Nandritra ny fivoriana dia nisy ny jery todika mahakasika ireo ezaka sy asa rehetra natao nandritra izay fotoana nisian’ny valanaretina Covid-19 izay ka nahafahana nifehy ny fihanak'ity valanaretina ity. Niarahanan-dinika tao ihany koa ny lamina vaovao hapetraka mba tsy hampirongatra indray ny valanaretina satria afaka fotoana fohy dia hiditra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika.
Nanao fanambarana tamin'ny pejy Facebook ny Ben'ny tanàna Naina Andriantsitohaina, androany, milaza fa tsy afaka handray hetsika hafa intsony ny zaridainan'Ambohijatovo. Nambarany fa amboarina ho Parc botanique ny zaridainan'Ambohijatovo mba ho fanatsarana ny tanàna sy ho famerenana ny hasin'Antananarivo. Efa tontosa tamin'ny septambra 2020 ireo dingana rehetra ara-taratasy sy ara-panjakana (PPM). Tamin'ny desambra no nivaly izany, ary tamin'ny 7 janoary teo no nahafantatra ireo orinasa hanao ny asa, ary efa 15 andro izay no nanomboka ny asa.
Nandritra ny fahatsiarovana ny nahafatesan'ny kolonely Ratsimanadrava Richard teny Ambohijatovo Ambony, androany 11 febroary 2021, dia nanamafy ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard, fa lesona tokony ho tadidina ny tantaran'Itompokolahy, izay maty noho ny hetraketrakin’ny olombitsy, nikatsaka ny tombotsoany manokana sy ny fitiavan-tseza. Tsy ekena hoy izy ny fihetsika toy izany, ary nohamafisiny fa izay minia manakorontana eto amin'ny firenena dia ho raisina ho fahavalom-pirenena.
Voatendry ho filohan’ny delegasiona manokana hitantana ny Kaominina ambonivohitr’i Mahajanga i Tonganirina Zafiarivelo Velomary, araka ny didim-pitondrana laharana faha 3033-2021 ny 28 janoary lasa teo. Randrianandrasana Joseph Justin sy Rabezady Flavien kosa no filoha lefitra voalohany sy faharoa. Izy ireo no hisahana ny andraikitry ny ben’ny tanàna sy ireo lefiny noho ny fahabangan-toerana taorian’ny fanendrena ny ben’ny tanàna voafidy Andriatomanga Salim Mokhtar ho eo amin’ny toeran’ny goverinoran’i Boeny ny 23 jolay 2020. Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy tao amin’ny lehiben’ny fileovan’i Mahajanga (préfet) ny ekipan’ny delegasiona manokana omaly talata. Ho tanterahana ny zoma izao kosa ny famindram-pitantanana amin’ny ekipa nisahana ny andraikitry ny mpanatanteraka teny anivon’ny kaominina teo aloha.
lundi, 08 février 2021 07:24
Raharaha 07 febroary 2009 : Tsy mety mikatona ny fery 12 taona aty aoriana
Misy ny ratra eto amin'ny firenena, na atao araka ny tokony ho izy ny fitsarana ny raharaha dia hita izay tompon'antoka sy ny andraikitry ny tsirairay tamin'iny faty olona iny, miaraka tamin'ireny lundi noir rehetra ireny, na avalona ho tantara izy iny, dia samy mizaka ny fahavoazana nisy, dia samy mampionon-tena, fa raha 12 taona lasa aty aoriana no lasa fifampiantsiana, sy fampitsikafonana sy hirahira ny lasa hatrany no ataon'ny andaniny sy ankilany dia tsy hiroso mihitsy isika. Ny Tsangambato dia natao ahatsiarovana ny maty ary anakatonana ny fery, fa tsy natao hanamafisana ny ratra. Reraka amin'ny ady tsy vita ny Malagasy, izay ianareo roa tonta dia tompon'andarikitra amin'izay nifanandrify anareo avy tamin'ireny ady sy fifandràtrana teto ireny. Ampy izay 12 taona izay, mila fitoniana ary miroso amin'ny fandrosoana ny Malagasy. Tsy misorona Patrick
Historiquement, les valeurs ancestrales malagasy (Soatoavina) dans son ensemble prônent et privilégient les échanges et la culture de dialogue dans tout aspect de la vie sociale, économique et même spirituel. Néanmoins, chaque ethnie, localité, régions, ou autres subdivisions sociogéographiques ont toutefois des spécificités propres (fombandrazana, fombantany) que des visiteurs ou migrants devraient absolument s’efforcer de connaitre et de respecter au risque de créer de vives tensions sociales au détriment du mieux vivre ensemble. Civisme et Etat de Droit en décadence, Un vivre ensemble menacé…Au final, la pandémie Covid-19 a encore une fois frappé fort et laissé des séquelles sur la vie au quotidien de nos concitoyens, pour ne parler que de l’insouciance vis-à-vis du respect des gestes barrière et de l’hygiène en général (gestion des ordures ménagères, saleté, non-respect des biens publics …), une société en proie au laisser aller…,au désordre et au désespoir.
7 febroary 2009-7 febroary 2021, 12 taona lasa izay no nisy diabe niazo an'Ambohitsorohitra, nandritra ny hetsi-bahoaka notarihin'ny Ben'ny tanàna Andry Rajoelina. Nisy ny tifitra variraraka ka nahafatesana sy naharatrana olona maro tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Tsy avela ho raraka an-tany ny ran'ireo lavo tamin'iny fotoana iny, hoy i Andry Rajoelina androany teo Ambohitsorohitra, nandritra ny fahatsiarovana ireo lavo tamin'iny 7 febroary 2009 iny. (Jereo Sary Tohiny)
Tetikasa vaovao maharitra dimy taona no ho vatsian'ny governemanta amerikana vola hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka eto Madagasikara. Nambaran’ ny Ambasadaoro amerikana Michael P. Pelletier sy ny Filoha Voalohan’ny Fitsarana Tampony eto Madagasikara, Rajaona Andriamanankiandrianina, ny fisian’ny tetikasa vaovao vatsian'ny governemanta amerikana vola mitentina 4 tapitrisa dolara, izay hanamafisana ny fahafaha-mahefan’ny Fitsarana momba ny Kaonty sy hanatsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka. Ny Fitsarana momba ny Kaonty moa dia sampandraharaha ambony eto Madagasikara, miandraikitra ny fanaraha-maso ny fandaniam-bolam-panjakana rehetra, sy ny fanaovana tombana politika ho an'ny Antenimieram-pirenena. Nanambara ny Ambasadaoro Pelletier fa “I Etazonia sy Madagasikara dia toy ny mpirahalahy mianala amin’izao fotoana itadiavantsika ny fandrosoana ho an’i Madagasikara izao ka hananganantsika andrim-panjakana mahomby, matotra, sy mampiaty....
Nitsidika ara-pomba fanajana ny Filohan’ny Antenimeran-doholona Herimanana Razafimahefa ny Ambasadaoro Michael Pelletier hiarahaba azy noho ny fahalaniany teo amin’io toerana io, sy hanatintra fa “Toy ny Mpirahalahy Mianala isika [Etazonia sy Madagasikara] amin’ny fanamafisana ny demokrasia, fitantanana ary tamberin’andraikitra eto Madagasikara.” Nilaza ny Ambasadaoro Pelletier fa “mino ny maha-zava-dehibe ny fifandraisan’ny andrim-panjakana toy ny Antenimieran-doholona sy ny vahoaka malagasy izahay. Izany indrindra no nahatonga anay hiresaka momba ireo tetikasa fanohanana an’i Madagasikara." Nankahery an’Atoa Razafimahefa izy amin’ny fitantanany io andrim-panjakana io, izay manana andraikitra manolo-tsaina ny governemanta manoloana ireo fanamby misy fiantraikany amin’ny fiainan’ny vahoaka Malagasy, ary miantoka ny hisian’ny tamberin’andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny asa ataon'ny governemanta sy ny fanaovana tombana ny politikam-pirenena.